Kutheni abaYili kufuneka banqamle ukusukela kwixesha lokukhula | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UYesu Arjona Montalvo | | Idizayini yeMifanekiso, ngokubanzi
Ngaba ukunyuka kwetekhnoloji yinto elungileyo okanye embi?. Ngokwabaphandi abavela kwi 'IYunivesithi yaseIllinois Chicago'Itekhnoloji yedijithali yenza ukuba abantu abaninzi basebenze ekhaya, kwaye inika ithuba lokunceda okusingqongileyo ngokugcina iphepha kunye nezinye izinto ezisetyenziswayo.
Nangona kunjalo, ngokutsho kwentatheli UMat Richtel del 'INew York Times', Oku kuneengxaki kubandakanya utshintsho kwingqondo inokuchaphazela amandla akho okuthatha inxaxheba kwiincoko, Kunye ne- ubuchule bokuyila. Ngokophando lwakutsha nje, nditsho nokuphazamiseka kwe- imizuzwana emihlanu inokuba nefuthe elibonakalayo kumandla akho okubuyela kwiprojekthi ngaphandle kokwenza iimpazamo ezingeyomfuneko.
Ukuba ungomnye waba bantu bahlala bephambi kwekhompyuter, unokuziva ukoyiswa zizo zonke izixhobo zakho zedijithali, kwaye Andiqinisekanga ukuba ulifumana njani ixesha lokuphuma kufuneka ufikelele kumandla akho apheleleyo. Nangona kunokubonakala ngathi ayinakwenzeka, ungangena kwindlela elungileyo yoku idetox yedijithali yokuhlaziya. Izibonelelo onokuzifumana zenza ukuba uwufanele umzamo.
1 Inyaniso emva kwesayensi
2 Funda ukuba wedwa
3 Vavanya ukonwaba kwakho xa ungaxhunyiwe kwi-intanethi
Inyaniso emva kwesayensi
Nokuba uyi- ingcali ezimeleyo (ezizimeleyo) osebenza ekhaya, a uyilo osebenza eofisini okanye umfundi owenza a ikhosi yoyilo, udinga ixesha wedwa ukudala nokuphuhlisa izimvo ezintsha. Njengengcali yoyilo, ukufumana ixesha lokuphuma kunokunyusa imveliso yakho ngaphezulu kokuba ubucinga ukuba kunokwenzeka, ngokungajonganga nzuzo egxile kulwazi oluninzi.
Internet kunye nomphakathi Ngokukodwa, banokuchaphazela umzimba wakho kunye nengqondo ngeendlela ezimangalisayo. Iqela elisemva kwe-AsapSCIENCE ligqibe ekubeni lichaze Iziphumo eziphambili ze-5 kwi i vidiyo ukuba sikushiye ngaphambili.
Inani elikhulayo lezifundo ngesihloko sokugcwala ngokwedijithali ziye zavumela iingcali zengqondo kunye nabaphandi ukuba bangene kwimicimbi ephambili enokuba sisiphumo sokusebenzisa itekhnoloji eninzi. Inani lezibonelelo eziqinisekisiweyo ezinxulumene nezicwangciso zedijithali zokuchithwa, inokukunceda uphinde ubulawule ubomi bakho. Izibonelelo zibandakanya oku kulandelayo:
Eyona nto ibalulekileyo.
Ukwanda kwemvakalelo yenkululeko.
Ukuphuculwa koxinzelelo kunye nenkumbulo.
Funda ukuba wedwa
Uphando lubonisa ukuba ngokwendalo izidalwa zentlalo, kwaye ngenxa yoko, banokuziva bengaqhelekanga ukuba babe bodwa kunye neengcinga zabo. Nangona kunjalo, ukuba injongo yakho kukuthatha ixesha elincinci usuku ngalunye ukuze usebenze ngokwakho, ufumane ubuchule, okanye ufumane i-detox yedijithali epheleleyo, inqaku kukufumana ixesha lokuba wedwa yonke imihlaNokuba uziva ungonwabanga ekuqaleni.
Ewe, kuluntu lwanamhlanje olusebenzayo, unokungaqiniseki ukuba ungayenza njani le mpumelelo ibaluleke kakhulu. Endaweni yokuthatha indlela egqithileyo ngokutsiba kwi Uqhankqalazo olupheleleyo lwedijithali, Qala nge thatha amanyathelo ambalwa kwicala elifanelekileyo:
Bekela bucala ixesha elincinci usuku ngalunye kwiziphumo zexesha elifutshane, kwaye ungagxila kwimizamo yakho yoyilo.
Fumana indawo ekhayeni lakho okanye eofisini apho ungazahlula khona kwabanye.
Chonga isakhelo esithile sosuku ngalunye, apho zonke izixhobo zedijithali zicinyiwe, kwaye unokukhupha unxibelelwano okanye uphazanyiswe yinto engekho yetekhnoloji.
Ingakumbi ukuba uqhele ukuchitha ixesha elininzi unxibelelana nabanye kwizixhobo zakho zedijithali, kunokuba nzima ukuthatha inyathelo lokuqala. Kodwa khumbula, iziphumo ezincumisayo ziphantse zabakho kwangoko y Ixabiso. Kungekudala, unakho umsebenzi wakho umgangatho ophezulu igqityiwe ngexesha elifanelekileyo, kwaye igcwaliswe nge izimvo ezizodwa ubungazi ukuba unayo.
Vavanya ukonwaba kwakho xa ungaxhunyiwe kwi-intanethi
Xa ucinga ngexesha olichitha ngaphandle kweintanethi, Ngaba awuyonwabeli?. Ukuba ufana nabantu abaninzi abanengxaki, impendulo ithi mhlawumbi ewe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Kutheni abaYili kufuneka banqamle ukusukela kwixesha lokukhula